Iniesta: Messi Ayaa Kala Daadin Doona Manchester City
HomeChampions LeagueIniesta: Messi Ayaa Kala Daadin Doona Manchester City
17/03/2015 Abdiwahab Ahmed
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Barcelona ee Andres Iniesta ayaa aaminsan in xiddiga kooxdiisa ee Lionel Messi uu noqon doono farqiga u dhexeeya labada kooxood ee Barca iyo Man City kulanka Champions League ee ay Arbacada isaga hor iman doonaan kaas oo ka dhici doonta Camp Nou.
Is-araggii hore ee labada kooxood oo ka dhacay garoonka Manchester City ee Etihad Emirates ayaa ku dhamaaday 2-1 ay ku badisay Barcelona, iyadoo uu labadaas goolna dhaliyey Luis Suarez.
“Leo Messi waa ciyaartoy aan cidna la barbar dhigi Karin, waa mid ka mid ah ciyaartooyada naadirka ah ee adduunka soo maray kaas oo kalidii guul u keeni kara kooxdiisa.” Sidaas ayuu yidhi Iniesta oo ka hadlayay shir jaraa’id.
“Mar kasta waa faa’iido in aad haysato ciyaartoy tayadiisa leh, waxaanan rajaynayaa in uu sii wado doono qaab ciyaareedkiisa wanaagsan kulanka City. Messi waa la hubaa.” Ayuu raaciyey Iniesta.
Laacibkan heerka caalami ee u dhashay wadanka Spain waxa kale oo uu ka hadlay kulanka El Clasico ee ay Axadda wada ciyaari doonaan Real Madrid iyo Barcelona, laakiin waxa uu dareenkiisa siiyey Manchester City.
“Waa run in aanu ciyaar muhiim ah la yeelan doono Axadda koox si toos ah nooga soo horjeedda, laakiin waxa ka horreeya kulanka Arbacada. Natiijo wanaagsan ayaanu ka helnay lugtii hore laakiin City waxay leedahay ciyaartooyo wanaagsan oo ku filan oo natiijadaas beddeli karaya. City waa koox khatar ah, waxay haystaan weeraryahanno ciyaarta siday doonaan u go’aamin karaya.” Ayuu yidhi.
Iniesta waxa uu intaa raaciyey in loo baahan yahay in kooxdiisu ay dareen wanaagsan u yeeshaan ciyaarta, diiraddooduna ahaato in ay iska ilaaliyaan khaladaad ay sameeyaan si ay u damaanad qaadaan in guushii lugtii hore ay u rumowdo.
Waxa uu kula taliyey naadigiisa in ay ka fikiraan in ay ikhtiraac cusub la yimaaddaan inta ay ciyaartu socoto, isla markaana sameeyaan farsado ay goolal ku dhaliyaan.
Iniesta waxa uu tilmaamay in kooxdiisu dooneyso in ay sannadkan ku guuleysato dhamaan tartamada ay ka qayb gelayso oo dhan, khaasatan Champions League, La Liga iyo Copa del Rey.
Eubank Jnr Warns George Groves
Amir Amir Iyo Sawir Gacmeedka Xasuuqii Germany 7-1 Brazil
Daawo: San Antonio Spurs Oo Karbaashtay Oklahoma City Thunder